रातको समयमा गर्न नहुने ३ काम भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नु’होस् – Khabar Patrika Np
रातको समयमा गर्न नहुने ३ काम भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नु’होस्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ०५, २०७८ समय: ९:२६:४५
सुख, शान्ति र समृद्धि बनाइ राख्नका लागि शास्त्रमा कयौँ नियम बताइएका छन्। यी नियममा हामीले कुन समयमा कुन काम गर्न हुँदैन् भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। विष्णु पुराणमा रातमा गर्न नहुने ३ कुराका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। ती ३ कामबाट जोगिदा तपाईले अनावश्यक समस्या भोग्नु पर्दैन्। आज हामी तपाईलाई रातको समयमा गर्न नहुने ३ कामका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
१. चौराहा तथा खुल्ला पार्कमा नजानुहोस्
कुनै पनि समझदार व्यक्ति रातको समयमा खुल्ला पार्क तथा चौराहा नजानुहोस्। रातको समयमा यस्ता ठाउँमा असामाजिक तत्वको उपस्थित हुने भएकाले यहाँ जानु नराम्रो मानिन्छ। यदी कुनै सज्ज व्यक्ति खुल्ला पार्कमा जाँदा समस्याको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ यो काम सदाचारको नियम विरुद्ध हुने गर्दछ। त्यसैले रातको समयमा आफ्नै घरमा बस्नु राम्रो हुन्छ।
२. श्मशानको आसपास नजानुहोस्
रातको समय शमशानको आसपास नजानुहोस्। श्मशान क्षेत्रमा सधै नकारात्मक उर्जा सक्रिय हुने गर्दछ । त्यसैले यसको नकारात्मक असर हाम्रो मन र मस्तिष्कमा पर्ने गर्दछ। साथै श्मशान क्षेत्रमा जलिरहेको शवबाट निस्किएको धुँवा पनि स्वास्थ्यक लागि हानिकारण हुने गर्दछ।
त्यस क्षेत्रको वातावरणमा कयौँ सूक्ष्म किटानु पनि हुने भएकाले स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले श्मशान क्षेत्रमा गएपछि स्नान गर्न जरुरी हुने गर्दछ। रातमा स्नान गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गर्दछ। त्यसैले रातमा यस्तो क्षेत्रमा जानु राम्रो मानिदैन्।
३. खराब चरित्र भएका व्यक्तिसँग टाडै रहनुहोस्
हुनत खराब चरित्र भएका व्यक्तिसँग सधै टाडा रहनु पर्दछ, अझ रातको समयमा यस्ता व्यक्तिको नजिक पर्नु हुँदैन्। खराब चरित्र हुने व्यक्तिले प्राय अधार्मीक र गलत कार्य रातमा गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यदी कुनै सज्जन व्यक्ति यिनीहरुको नजिक गएमा समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले रातमा यस्ता व्यक्तिबाट टाढै रहनु राम्रो हुने गर्दछ।